Demografikan'i Martech Zone | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 10, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Mety nahatsikaritra ianao fa nihazakazaka izahay a Crowdsains fanadihadiana amin'ny bilaogy vetivety izao. Manantena aho fa nanokana fotoana hamaliana ireo fanadihadiana ianao - manaitra ny valiny. Ireto misy fanasongadinana:
62.5% ny mpamaky dia graduates college, 21.9% no manana grady degrees
51.6% ny mpamaky dia miasa manontolo andro, 32.3% no miasa tena.
Ny ankamaroan'ny mpamaky dia mpanapa-kevitra na manan-kery:
Avy amin'ny mpamaky orinasa amin'ny habe rehetra:
Ny ankamaroan'ny mpamaky dia mpitantana ambony na mpitarika an'ny orinasany.
Ny ankamaroan'ny mpamaky dia ao amin'ny 34 ka hatramin'ny 44 isan-taona.
56.3% ny mpamaky manana a fomba fijery somary ratsy amin'ny toekarena.
Ny ankamaroan'ny mpamaky no manao $ 75k mahery, miaraka amin'ny $ 150k ambonimbony.
Ny ankamaroan'ny mpamaky dia mampiasa Internet mihoatra ny 24 ora isan-kerinandro, miaraka amin'ny iray ampahatelony mihoatra ny 36 ora isan-kerinandro.
Ny tena nahaliana angamba dia ny fiheverana ny mpandraharaha - maherin'ny antsasaky ny mpamaky no nilaza fa liana izy ireo manomboka ny orinasany manokana sy / na fanovana asa sy asa. Amin'ny maha mpandraharaha serial (aka - bandy iray izay tia mitsangana avy amin'ny fanamby iray mankany amin'ny manaraka), nahagaga ahy izany. Rehefa mandeha ny fotoana dia mety hampirisika ahy ny hisarika mpamaky mitovy hevitra amiko amin'ny bilaogy.
Ireto demografika ireto dia eo indrindra no itiavako ny bilaogy ho toy ny raharaha mitaona sy mahasoa!
Apr 10, 2010 amin'ny 11: 36 AM
Mahaliana ary misaotra amin'ny fizarana ny vaovao sy ny fitaovana! Data ho an'ny lehilahy data!
Miarahaba sy mirary soa,